လူတော်ချစ်တဲ့ လူတော်တွေ - Clever Guys Love Clever Guys | mmshare
လူတော်ချစ်တဲ့ လူတော်တွေ - Clever Guys Love Clever Guys
Submitted by everlearner on Sun, 05/13/2012 - 15:43
သမ္မတကြီးက နိုင်ငံပြင်ပ ရောက်နေတဲ့ ပညာရှင်တွေ ပြန်လာဖို့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ခေါ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပြန်လာချင်ပါတယ်... ဒါပေမယ့်
၂၄ နာရီ အချိန်မရွေး အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ မီး... ကမ္ဘာကြီးနဲ့ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အပိတ်အဆို့ အတားအဆီး ကင်းတဲ့ မြန်နှုံးမြင့် အင်တာနက်... လက်သင့်ရာ ဝေမျှစားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အစိုးရ ပရောဂျက်တွေကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ယှဉ်ပြိုင် ရယူ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း... လုပ်ငန်းတွေကို စနစ်တကျ အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ မျက်နှာမလိုက်တဲ့ ဥပဒေ... ... ... စတဲ့ စတဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အခြေခံအချက်တွေ မခိုင်မာသေးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အဝေးကနေပဲ ပိုက်ဆံပြန်ပို့ နေပါ့မယ်...
အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ပြောထားတာတွေက တိုင်းပြည်တစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံအချက်တွေပါ
ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး "ရွှေကိုမလို ငွေကိုမလို အာဏာမလို - မြန်နှုံးမြင့် အင်တာနက်သာ လိုသည်" ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီးနဲ့အင်တာနက် မြန်မာပြည်မှာ ရနေတာ နှစ်ပေါင်း မနည်းတော့ပါဘူး။ ဒါတွေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဖို့က သာမန်ပြည်သူ တစ်ယောက်ထက် အဲဒီ သာမန်ပြည်သူတွေက အပ်နှင်းထားတဲ့ အခွင့်အာဏာနဲ့ အခွန်ငွေတွေကို ကိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေမှာ တာဝန် ရှိပါတယ်။
အိမ်တစ်အိမ်မှာ ဦးဆောင်တဲ့ မိဘတွေ ဦးလေးသားချင်းတွေက စိတ်ကြိုက် သုံးစွဲ ပျော်ပါးပြီး သားသမီးတွေက စုတ်ပြတ်နေရင် ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်မှာလဲ။ ကလေးတွေကိုလား...
တကယ်တော့ ရှေ့ကလူတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆိုးမွေတွေ သူတို့ ထင်သလို လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်တွေကို အခု ကျွန်တော်တို့ ခါးခါးသီးသီး ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ မသေခင်တော့ နောက်မျိုးဆက်တွေ အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲပေးခဲ့နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Case Study from Singapore ICT Sector
တကယ်တော့ အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အင်တာနက်နဲ့ လျှပ်စစ်မီး ပြဿနာက ချက်ချင်း ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်... ကျွန်တော် မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်းမှာ အင်တာနက် သွားသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နေတဲ့ နေရာနဲ့2နာရီလောက် ဘတ်စ်ကားစီးပြီး သွားမှ ရောက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် နေ့တိုင်းသွားတယ်။ MICT park နဲ့ နီးတော့2Mbps လိုင်းတွေကို အပြည့်နီးနီး ရတယ် မီးကလည်း အချိန်ပြည့်ရတယ်။ ပိုက်ဆံလည်း အများကြီး မပေးရဘူး။
စင်္ကာပူမှာ အဲဒီလို နေရာမျိုးတွေကို အစိုးရက အများကြီး လုပ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Hall Type တွေပေါ့။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း စချင်တဲ့ လူငယ်တွေကို ငှားပေးတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းကို၊ ကုမ္ပဏိကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသားတော့ ဖြစ်ရတယ်။ Hall ထဲက စားပွဲရှည်ကြီးတွေမှာ ကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ် အလုပ်လုပ်ကြတာပဲ။ အခမဲ့ ငှားပေးတာ။ ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ အခန်းတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီလိုနေရာတွေက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း အစိုးရအနေနဲ့ ချက်ချင်း လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ အချက်တွေပါ။ အဆောက်အဉီး အကောင်းစား ဖြစ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
တိုင်းပြည်မှာ အခြေအနေအရ ပရောဂျက် အကြီးတွေက အစိုးရဆီမှာပဲ ရှိနေသေးတဲ့ အတွက် အစိုးရ ပရောဂျက်တွေကို လွတ်လပ်စွာ ယှဉ်ပြိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့်က အရေးကြီးပါတယ်။
လွတ်လပ်စွာ ယှဉ်ပြိုင် လုပ်ကိုင်ခွင့်မရဘဲ အစိုးရနဲ့ မကင်းရာ မကင်းကြောင်း နီးစပ်ရာလူတွေပဲ အလုပ်တွေရသွားပြီး တကယ် လုပ်ရမယ့် လုပ်တတ်တဲ့သူတွေက လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသွားသူတွေဆီကနေ အလုပ်တွေ ပြန်ယူလုပ်တာတွေ ကြားနေရပါတယ်။
တကယ်နစ်နာတော့ အစိုးရနဲ့ ပေးလိုက်ရတဲ့ ပြည်သူ့ ပိုက်ဆံတွေ။ ဒီလို ကြားခံတွေ ပွဲစားတွေ များနေလို့လည်း အပြင်မှာ ဒေါ်လာတစ်ထောင်တန်လောက် ပစ္စည်းကို ဘတ်ဂျက်မှာ ၃၀၀၀ လောက် ဖြစ်နေတာပေါ့...
Brain Drain....? Why....?
မြန်မာလူငယ်တွေ အပြင်ရောက်ကုန်တဲ့ အထဲမှာ အကြောင်းတစ်ခုက အခုလို မမျှတတဲ့ အပြိုင်အဆိုင်တွေကြောင့်ပဲလေ။ အစိုးရပရောဂျက် ဆိုတာ တကယ်တော့ ပြည်သူလူထုအတွက်ပါ။ ရွေးချယ်တဲ့ သူတွေရဲ့ တရားမျှတမှုကို မူတည်ပြီး အကောင်းဆုံးနဲ့ စားရိတ်အသက်သာဆုံး ပရောဂျက်တွေက ဘေးဖယ်ခံလိုက်ရတာပဲ။ ဈေးများများ တင်မှ ဝေစု များများ ရမှာကိုး။ များများပျက် မြန်မြန်ပျက်မှ ပြင်ဆင်စားရိတ်တွေ သုံးလို့ရမယ်။ သိပ်ကို ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်တွေပါ။
မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါတဲ့ နေရာတွေ အချိန်ကာလတွေမှာတော့ တကယ်တတ်သိတဲ့ ပညာရှင်တွေ ဘေးရောက်ဦးမှာပါပဲ။ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတဲ့ သူတွေက ပညာရှင်တွေကို ချစ်တယ် အားကိုးတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကတော့ ဘေးနားမှာ နားဝင်ချိုစရာလေးတွေ ပြောပေးပြီး အလိုလိုက် အကြိုက်လုပ်ပေးတဲ့သူတွေကိုပဲ သဘောကျတယ်။ ပညာရှင်တွေကလည်း အဲလို မလုပ်တတ် မလုပ်ချင်သူတွေဆိုတော့ နောက်ဆုံးမှာ ပညာရှင်ကို Welcome လုပ်ပြီး ပျော်အောင်ထားတဲ့ နေရာတွေကို ရောက်ကုန်တာပါပဲ။
သမ္မတကြီးရဲ့ လတ်တလော မိန့်ခွန်းတွေအရ (http://goo.gl/0rp1D) မကြာခင်တော့ ဒီပြဿနာတွေ ရှင်းလာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အခုလို သမ္မတရုံးနဲ့ လူထုကြား One way communication channel (http://www.president-office.gov.mm) တစ်ခုရှိလာတာကိုက ဝမ်းသာစရာ အချက်တစ်ခုပါ။ အရင်လို ပြန်ကြားရေးနဲ့ ဂျာနယ်တွေကို အားကိုးစရာ မလိုတော့သလို အခြေအနေတွေ သတင်းတွေကို မျက်ခြေမပြတ်သိနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတွေကို တကယ် အကောင်အထည်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အမြဲ ထုတ်ပြန်သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Clever Guys Love Clever Guys
တကယ်တော့ ဦးနှောက်မရှိတဲ့သူတွေက သူတို့နားမှာ သူတို့ထက် တော်တဲ့သူတွေကို မနေစေချင်ဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ပညာပြမှာ ကြောက်လို့တဲ့။
ဦးနှောက်ကောင်းတဲ့သူ တော်တဲ့သူတွေကတော့ သူ့ထက်တော်တဲ့သူကိုပဲ အားကိုးချင်တာ လိုချင်တာပါ။ လူတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် တိုင်းပြည်တစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အတွက် တော်တဲ့သူတွေ၊ ဉီးနှောက်ကောင်းတဲ့ သူတွေနဲ့ နေ့ရော ညပါ အတူတူ အလုပ်လုပ်တဲ့ နည်းထက်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်း မရှိတော့ပါဘူး။
Tin Aung Linn (not verified)
Thu, 05/17/2012 - 03:46
Not only us but also the Government have to take care of our profession because they can capable of forming good infrastructure.
Sun, 10/28/2012 - 12:32
Update: Direct Communication Channel
Now, there isadirect communication channel at the Myanmar President Office.
The public can send anything to the website at http://www.president-office.gov.mm/contact
This is reallyagreat improvement and really appreciate this.